पहिलोपटक हलिउडको आईपपमा भिड्दै दुई नेपाली बाल कलाकार - inaruwaonline.com
पहिलोपटक हलिउडको आईपपमा भिड्दै दुई नेपाली बाल कलाकार
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पौष ०७, २०७२ समय: १७:२३:१६
पुष ७ दोहा । नेपाली कलाकारिताको प्रभाव विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरु माझ छाईरहेको छ । आफ्नो प्रतिभा प्रष्फुटन गर्दै देश तथा विदेशमा आफ्नो कला प्रर्दशन गर्न नेपालीहरु पछि पर्दैनन् । प्रायः कलाकारहरु नेपाललाई नै आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई रहेका छन् । प्रतिभाको खोजी कार्य पनि उत्तिकै भएको पाईन्छ ।
विभिन्न प्रतियोगीताको आयोजना गरेर प्रतिभाको खोजी भईनै रहेको छ । यसैक्रममा विश्वव्यापी रुपमा उदयीमान प्रतिभाको खोजी कार्यमा जुटिरहेको हलिउड सिटि अमेरिकाको लस एन्जलस्थित आईपप -ईन्टरनेश्नल पि्रजेन्टेसन अफ पर्फमरस्) ले कतारबाट दुई जना नेपाली बाल कलाकारलाई जनवरी २०१६ को प्रतियोगिताका लागि छनोट गरेको छ ।
आईपपको लामो ईतिहासमा नेपालीले पहिलो पटक भाग लिदै छन् । विगत ३ बर्षदेखि परिवारसँग कतार बस्दै आएका झापाकी १४ बषर्ीय रविना पोखरेल र ९ बर्षिय पुकार पोखरेलले आईपपको प्रतियोगीतामा भाग लिदै छन । गत जुनमा आईपपको टिम विश्वव्यापी अडिसनका क्रममा कतार आईपुगेको थियो । कतारमा विभिन्न देशका ५ सय प्रतिष्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै उनीहरु यही ७ जनवरी २०१६ मा लस एन्जसलमा हुने फाईनल अडिसनमा भाग लिने मौका पाएका छन् ।
कतारको पहिलो अडिसनमा छनोट भएपछि अभिनयका लागि रविना पोखरेललाई छानेको थियो । आयोजकको नै कथाबस्तुमा दोश्रो अडिसनमा अभिनय गरेकी रविनालाई अभिनय विधाका १ सय ५० जना सहभागीमध्येबाट छनोट गरिएको थियो ।
त्यस्तै अभिनयका लागि नै अडिसन दिएका पुकार क्यारिकेचर भ्वाईसमा छनोट भएका छन । उनले अरुको आवाजको नक्कल गर्ने गर्छन् । आयोजकका अनुसार नेपाली नागरिक पहिलोपटक आईपपको प्रतिष्पर्धामा भाग लिँदैछन् । उनीहरु यही २७ डिसेम्बरमा कतारबाट प्रतियोगीतामा भाग लिन अमेरिका जादैछन् ।
आईपपले विश्वभरीबाट ४ वटा विद्याका उदयमान प्रतिभाको खोजी गर्दै आएको छ । जनवरीमा हुने फाईनल अडिसनमा विश्वका प्रख्यात कलाकारहरुले निणर्ायकको भुमिका खेल्ने आयोजकले बताएको छ । विभिन्न देशबाट छानिएका ५० जना कलाकारहरु फाईनलमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् ।
आईपपका सिईयो रोन प्याटरसन् र प्रबन्धक मार्क गुर्नवी लगायत ४ जनाको टोलीले कतारको प्लाजा होटलमा अडिसन लिएको थियो । कतारको अडिसनमा कतार लगायत यहाँ बस्दै आएका फिलिपिन्स , जार्डन, लेवनाल, भारत लगायतका ७ देशका कलाकारहरु सहभागी भएका थिए ।
को हुन रविना र पुकार ?
झापा जिल्लामा जन्मेका रविना पोखरेल र पुकार पोखरेल विगत ३ बर्ष देखि कतारमा परिवारसँग बस्दै आएका छन् । उनीहरु कतारको द क्याम्वि्रज स्कुलमा अध्यनरत छन । १४ बषिर्य रविना ९ कक्षामा अध्ययनरत छन भने ९ बषिर्य पुकार कक्षा ४ मा अध्ययन गर्दै छन् । बुबा नविन पोखरेलको कतारमा व्यवसाय भएका कारण उनीहरु कतारमा अध्ययन गरिरहेका छन । ५ बर्ष पहिले कतार छिरेका नविन कतारका सफल नेपाली व्यवसाय मध्ये एक हुन । आमा रमा अर्याल राष्ट्रिय गायिका हुन । उनीहरु रमा र नविनको दुई मात्र सन्तान हुन ।
सानै उमेरबाट कलाकारितामा रुची राख्ने रविना र पुकारलाई आईपपले पहिलो नेपाली प्रतिभा भएको बताएको छ । उनीहरुले विश्वमा नेपाली कलालाई चिनाउने आशा लिएको छ ।
के हो आईपप ?
हलिउड सिटी भनेर चिनिने अमेरिकाको लस एन्जलमा रहेको ईन्टरनेश्नल पि्रजेन्टेसन अफ पर्फमरस् -आईपप) ले विश्वमा रहेका ४ विद्यामा उदयमान कलाकारहरुको खोजी कार्य गर्छ । अभिनय , गायन , नृत्य र मोडलिङ्ग विद्याका कलाकारहरुको खोजी कार्यका लागि अमेरिका, क्यानडा, लेटिन अमेरिका, एसिया, यूके लगायतका देशहरुमा आयोजक टिम पुगेर अडिसन लिने गर्छ । विश्वका नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने गर्छ । विभिन्न देशबाट छनोट भएका प्रतिभाहरुलाई लस एन्जलमा ४ दिन तालिम दिएर फाईनलमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
बर्षमा २ पटक विभिन्न देशमा पुगेर अडिसन लिने आईपपले अडिसनबाट छानिएका प्रतियोगीहरुलाई लस एन्जलमा फाईनल अडिसन लिने गर्छ । हरेक जनवरीमा लिईएको अडिसनको जुनमा र जुनमा लिईएको अडिसनको जनवरीमा लस एन्जलमा फाईनल अडिसनको आयोजना हुने गर्छ । फाईनलबाट छानिएका प्रतिभावान कलाकारहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा अवसर समेत दिने गरेको छ ।
हलिउडका प्रख्यात फिल्म कम्पनी, निर्देशक, निर्माता, विज्ञापन कम्पनी लगायतको क्षेत्रबाट फाईनल अडिसनमा सहभागीता रहने र फाईनलका उत्कृष्ट कलाकारहरुलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा अनुबन्धित गर्ने काम हुन्छ । प्रतिभावान कलाकारहरुलाई एउटा राम्रो अवसर प्रदान गर्ने काम आईपपको कार्यक्रमले दिलाईरहेको छ ।
आत्मविश्वासले नै जिवनमा सफलता पाउन र नयाँ अनुभव बटुल्ने मौका मिल्छ । आईपपले भनेको छ ‘आईपप हाईपर ड्राइवमा आफ्नो अनुभवमा विश्वास राख्दछ । एक सुरक्षित र रचनात्मक प्रतिभाको खोजीका लागी विश्वमा रहेको उदयमान प्रतिभालाई समेटदै संसारमा प्रस्तुती गर्नुछ ।’